Ogaden News Agency (ONA) – Dhalinyarada MN iyo Gud. jaaliyadda oo qadasharaf Xisbiga Jamhuuriga ee gobolka lagu martiqaaday
Dhalinyarada MN iyo Gud. jaaliyadda oo qadasharaf Xisbiga Jamhuuriga ee gobolka lagu martiqaaday
Posted by ONA Admin	/ June 19, 2012
OOL – Guddiga Xidhiidhka Qaxootiga ee Minnesota iyo Wakiilada Odayasha (Senate) degmada 42aad ee Xisbiga Jamhuuriga ayaa Qadasharaf iyo Isbarasho ku sameeyay Eden Prairie maalintii Sabtida ee bishu ahayd 16ka.
Waxaa jaaliyadda Ogadenya matalay oo qadasharafta lagu martiqaaday Gudoomiye mudane Axmad Majeerteen iyo xubna kale oy ka mid yihiin Maxamad Amiin, Ayan M. Xassan iyo Najma Maxamad oo ka socday Ururka Dhalinyarada iyo Ardayda OYSU.
Hadafka Qadasharafta waxay ahayd in la abuuro oo la dhiso jawi saaxiibtinimo iyo dood-wadaag ay yeeshaan Xisbiga jamhuuriga iyo Jaaliyadda Somalida (Somali Community), Jaaliyadda Ogadenya (Ogaden American Community), Jaaliyadda Kenya (Kenyan Community of Minnesota).
Waxaa munaasabadda ka soo qaybgalay oo fadhiyay xubnaha firfircoon ee Xisbiga Jamhuuriga Minnesota oy ka mid yihiin Rep. Kurt Zellers, Rep. Matt Dean, Congressman Erik Paulsen, Senator David Hann, Rep. Jenifer Loon iyo Rep. Kirk Stensrud. Xubnihii fadhiyay madasha waxaa dhamaantood ka fajiciyay warbixnta ay soo bandhigeen ergada Ogadenya ee ka xog-waramaysay ku tumashada xuquuqda aadanaha ee xukuumadda Itobiya ay ka wado Ogadenya iyo xasuuqa manhajiga ah ee shacabka Ogadenya lagu hayo.
Waxaa lagu martiqaaday Odyaasha inay ka soo qaybgalaan Kal-fadhiga soo socda ee Ururka Dhalinyrada iyo Ardayda OYSU ay ku qaban doonaan magaalada Minneapolis maalinta Sabtida ee 23ka June 2012 halkaasoo ay ka heli doonaan faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan xasuuqa ka socda Ogadenya iyo sida ay muhiim ugu tahay arintaa Somalida haysata dhalashada Mareykanka ee ka timid Ogadenya.